Steve Wozniak kwenyere na Amazon Echo ga-abụ nnukwu ntanetị n'ịntanetị | Esi m mac
N'ajụjụ ọnụ CNBC nwere nso nso a n'izu gara aga, ọtụtụ ndị nwere nkà na Onye nchoputa Apple Steve Wozniako kwuputara ole ọ masịrị Amazon ikwughachi ebe o kwuputara na ọ ga - abụ »nnukwu ikpo okwu na - esote n’ọdịnihu dị nso“.
N'ihi na ndị niile na-amaghị ihe Amazon ikwughachi bụ, ọ bụ nnọọ a Bluetooth ọkà okwu na iche na-akpọ music ma ọ bụ ọdịyo faịlụ nwekwara ike nke na-anata iwu olu na Nsonye nke a mebere nnyemaaka aha ya bụ Alexa nke ahụ ga-echetara anyị Siri ọtụtụ anyị niile nwere iPhone.
Agbanyeghị, Wozniak gosipụtarala ọ hisụ ya maka ọrụ ahụ site n'ịsị:
Obi dị m ezigbo ụtọ ugbu a na ihe niile gbara Amazon ikwughachi, oddly ezu. Ọ bụrụ na m ziri ezi, echere m na ọ ga-abụ nnukwu ikpo okwu na-esote n'ọdịnihu dị nso […] ya n'ebe ọ bụla n'ime ụlọ bụ okomoko na-enye anyị nnwere onwe.
N'ụzọ dị otú a Wozniak kọwara otú o si bụrụ ihe ijuanya ide akwụkwọ njem Uber ma ọ bụ jụọ maka akwa nhicha akwụkwọ, ebe ọ bụrụ na Amazon Echo mara usoro ikpeazụ gị na Amazon, o nwere ike ịjụ gị ọzọ maka ọzọ.
Ọbụna ọ na-egwu egwuregwu banyere ọnọdụ ebe ọ gwara ọkà okwu ka o nye iwu nkuzi ọzọ. Mana ihe kachasị mkpa bụ na anyị ekwesịghị icheta ngwa ọ bụla na-arụ ọrụ ahụ ma ọ bụ nke ahụ, anyị na-enye iwu ka ịzụta ngwaahịa, dobe tebụl ... ọ ga-eme ya na akpaghị aka.
John Macfarlane, onye isi oche nke Sonos, ụlọ ọrụ nke Apple nwetara n'oge na-adịbeghị anya, toro Amazon Echo yana:
Ngwaahịa a bụ nke mbụ nwere ike iwekọta njikwa olu zuru oke n'ime ụlọ. Ewu ewu ya na ndị na-azụ ahịa ga-eme ka ọhụụ ọhụrụ gaa ngwa ngwa. Ihe ọhụrụ taa nwere ike bụrụ ụkpụrụ echi.
Nkwupụta ụda Amazon nwere ike dị ọnụ $ 179,99 na amazon american website, ma ọ dị mwute ugbu a, enweghị ngwaahịa ha na-egosiputa nnyefe e mere atụmatụ site na Machị 31st. Ihe nlere a na ndi ozo dikwa karie nke nwekwara Alexa, nke mbu bu Amazon abuo maka $ 89,99 na Amazon Tap maka $ 129,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Steve Wozniak na-eche Amazon Echo ga-abụ nnukwu ntanetị ntanetị ọzọ
Apple ọ zụtala Sonos? Apụghị m ịchọta ebe ọ bụla maka ọrụ ahụ: S
Zaghachi Juan Rodríguez
Batrị nke MacBook gị na mkpa ya kwa ụbọchị